နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူနှင့်အစ်ကိုအရင်းတို့မှစွန့်လွှတ်လိုက်ပါပြီတဲ့ - Cele Fans
May 16, 2021 Cele Fans Local News Comments Off on နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ဆိုပြီးမိခင်ဖြစ်သူနှင့်အစ်ကိုအရင်းတို့မှစွန့်လွှတ်လိုက်ပါပြီတဲ့
ကြၽန္ေတာ္သည္ကနီသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ကနီၿမိဳ႕တြင္ ေမြ.းဖြာ.းႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ယခုအထိနိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈ႔ကူညီေရးကိုသာတတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ကနီမွာပင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္၏မိခင္ႏွင့္အစ္ကိုမွာႏွစ္သက္မႈ႔မရွိခဲ့သျဖင့္ ျပႆနာမ်ားစြာ ႀကဳံခဲ့ရၿပီးအိမ္မွာ
​ေနထိုင္မႈ႕မရွိခဲ့သည္မွာမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ (ဖခင္မွာဆုံ.းပ.ါးၿပီးျဖစ္သည္) ယခုေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္လည္းတတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္အားပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတ.ားျမ.စ္ခဲ့ေသာ္လည္းမရသျဖင့္ယေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္၏ မိခင္ႏွင့္အစ္ကိုတို႔မွ“
သားသမီးအျဖစ္မွ၊ ညီအျဖစ္မွစြ.န့္လြ.တ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ႏွင့္လုံးဝမပက္သက္ေတာ့ေၾကာင္း” ဖုန္းဆက္လာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံလိုက္သည္။ ကိုယ္ယုံၾကည္ရာလမ္းကိုဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ေနရာမွာ ဘဝသံသရာတစ္ေကြ႔မွဘယ္ေႏွာင္ႀကိဳးကိုမွ် အေရာင္မဆို.းလိုပါ။
ကြၽန္ေတာ္အိမ္က မိခင္အစ္ကိုတို႔မွစြ.န့္လြ.တ္ပါေစဒါဟာအေရးသိပ္မႀကီးဘူး ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးနကၡတ္စုံခ်ိန္မွာဒီမိုကေရစီရရွိေရးဟာပိုအေရးႀကီးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ ေ. သြးျဖင့္ေရးေသာနိုင္ငံေတာ္ေ. သြးပင္လယ္ထဲျမဳပ္ေမ်ာေမ်ာမယ့္ဒီမိုကေရစီမျဖစ္ေရးအတြက္အေရးေတာ္ပုံ
​ေအာင္သည္အထိအတူတကြရင္ဘတ္တူသူမ်ားႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္။ဒီပိုစ့္ကိုတင္ရတာကအမ်ားအသနားခံခ်င္၍ အကူအညီေပးေစလို၍ ရိုးရွင္းစြာမဟုတ္ရပါ။ ဒီလိုကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြကိုမေရးခ်င္ဘဲေရးျပရတာ မ်က္စိေနာက္သြားရင္ေတာင္းပန္ပါရေစဗ်ာ။
စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းမျပဳပါရန္ေလးစားစြာေမတၱာရပ္ခံပါတယ္၊ အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္။ အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္႐ႈ႕ေပးၾကေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ ေက်းဇူးလည္းအထူးတင္႐ွိပါတယ္ေနာ္။ ခရက္ဒစ္
ကျွန်တော်သည်ကနီသားမိဘနှစ်ပါးမှ ကနီမြို့တွင် မွေ.းဖွာ.းကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ယခုအထိနိုင်ငံရေးနှင့်လူမှု့ကူညီရေးကိုသာတတ်စွမ်းသရွေ့ကနီမှာပင်ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ ကျွန်တော်၏မိခင်နှင့်အစ်ကိုမှာနှစ်သက်မှု့မရှိခဲ့သဖြင့် ပြဿနာများစွာ ကြုံခဲ့ရပြီးအိမ်မှာ
နေထိုင်မှု့မရှိခဲ့သည်မှာများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ (ဖခင်မှာဆုံ.းပ.ါးပြီးဖြစ်သည်) ယခုနွေဦးတော်လှန်ရေးကာလတွင်လည်းတတ်စွမ်းသရွေ့ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်အားပါဝင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရန် အမျိုးမျိုးတ.ားမြ.စ်ခဲ့သော်လည်းမရသဖြင့်ယနေ့တွင် ကျွန်တော်၏ မိခင်နှင့်အစ်ကိုတို့မှ“
သားသမီးအဖြစ်မှ၊ ညီအဖြစ်မှစွ.န့်လွ.တ်ကြောင်း၊ အိမ်နှင့်လုံးဝမပက်သက်တော့ကြောင်း” ဖုန်းဆက်လာသည်။ ကျွန်တော် ကြည်ဖြူစွာလက်ခံလိုက်သည်။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကိုဆက်လျှောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာ ဘဝသံသရာတစ်ကွေ့မှဘယ်နှောင်ကြိုးကိုမျှ အရောင်မဆို.းလိုပါ။
ကျွန်တော်အိမ်က မိခင်အစ်ကိုတို့မှစွ.န့်လွ.တ်ပါစေဒါဟာအရေးသိပ်မကြီးဘူး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနက္ခတ်စုံချိန်မှာဒီမိုကရေစီရရှိရေးဟာပိုအရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ေ. သွးဖြင့်ရေးသောနိုင်ငံတော်ေ. သွးပင်လယ်ထဲမြုပ်မျောမျောမယ့်ဒီမိုကရေစီမဖြစ်ရေးအတွက်အရေးတော်ပုံ
အောင်သည်အထိအတူတကွရင်ဘတ်တူသူများနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်။ဒီပိုစ့်ကိုတင်ရတာကအများအသနားခံချင်၍ အကူအညီပေးစေလို၍ ရိုးရှင်းစွာမဟုတ်ရပါ။ ဒီလိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကိုမရေးချင်ဘဲရေးပြရတာ မျက်စိနောက်သွားရင်တောင်းပန်ပါရစေဗျာ။
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမပြုပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်၊ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ်
မုန်တိုင်းတစ်လုံး မေလတတိယပတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်